ရွှေဝယ်မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကို သတိထားပါ – BaHuTuTa
November 9, 2020 admin Knowledge 0
ရွေဝယ်တို်င်းဂျင်းထည့်လိို့မရတဲ့ ပညာ သင်ပေးထားတဲ့အမေကိိုကျေးဇူးတင်မိတဟ် မျက်စိထဲဂျင်းအကြီးစားတွေမြင် ရတာ စိတ်လေ မိတယ် …အလွယ်ကူဆုံးရွေဝယ်ရင် တန်မတန် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပီ ဝယ်နည်းလေးပြောပြရမလားး
ဒီလို်ပါ ရွေဝယ်ရင်ဂျင််းမထည့်ခံရဖို့ဆိုတာက ရွေမှာ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ပဲရည်ဆိုပီလာပါတယ် .သူ့အရည်လိုက်တန်ဖိုးကိုယ်စီပေါက်စျေးရှိပါတတယ် .အဓိက ကိုယ်ဝယ်မဲ့ရွေက စိန်ပါတယ်ဆို 13″ရည်နဲ့ပဲလုပ်လို့ရပါတယ်။
၁၄ ၁၅ ပဲရညိဆို တာပုံမှန်ရွေပါ ရွေကောင်းပါ .16ပဲရည်ဆိုတာ အခေါက်ရွေပါ အပျော့ပါ .ကြိုးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး ကွေးလို့ရတတယ် .နောက်တခုက >>> ဒုံး ဒုံး ဆို အလျော့လက်ခမပါတဲ့ သမားရိုးကျ သိကြတဲ့ ဒုံးဆိုတာ အပေါင်ဆုံး ရွေပါ 13 .14.15.16 ရောနေတာ အပေါင်ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ် သူက တော့ သူများဝတ်ပီသားရွေအဟောင်းပေါ့ ရွေစု မယ်ဆို ဒုံး နဲ့ အခေါက်ကအတန်ဆုံးပါပဲ။
အဓိက ပြောခြင်တာ ရွေဆိုင်ကြီးတွေရော ရွေဆိုင်လေးတွေပါ ရောင်းနေကြတဲ့ ဒုတိယတန်းစား 14 15 ရွေတွေ ကို ကြိုက်လို့လှလို့ဝယ်ကြတယ် စိတ်ထဲမှာ တမျိုး ပဲ ဒီရွေ မူရင်းစျေးဘယ်လောက်တန်တယ်မသိဘူးတချို့က
ကျမအမေက အရင်က ရွေ ရောင်းဝယ်လုပ်ပါတယ် ကျမအသက် ၁၂လောက်ကစပီ ကျမအမေနဲ့လျောက်လိုက်ခဲ့လို့အတွေ့ကြုံရမြင် နေရတာ မသိတဲ့သူ က 70%ရှိပါတယ် ကြိုက်စျေးပေးဝယ်တယိ ဆိုင်ကတွက်ပြတယ် အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြနါသွင်းတယ်
အများကြီးရှုံးနေတယ် ဟာ ဘာကြောင့်လည်း မသိဘူးလေ သူတို့ဘောက်ချာဖွင့်စျေးနဲ့ ပေါက်စျေး တွက်ပီင်္ ပြနါပေးတာဆိိုတော့ ပြောမရဘူးလေ .အင်း ဒါဆို ဘယ်လို်ဝယ် မလဲ ???ဘယ်လောက်တန်တယ် ဆို တာ သိမလဲ ???
no.1 ကိုယ်ဝယ်မဲ့ရွေက ဘယ်အမျိုးအစားလည််း အခေါက်လားး ? 16″ ရည် /ဒုတိယတန်းစား ရွေကောင်း 14 15″ရည် လား / အညံ့စား 13″ရည်လား စိန် နဲ့ ဆို ရင်် တော့ 13″ရွေနဲ့ပဲ ခက်လို့ရမှာပါ .ရွေညံ့ 13 ပဲရည် မဝယ် မိဖို့ လိုပါတယ််…no.2 ရွေ 14″15 “ရည် ဝယ် မယ် ကွာ ။
ရွေဆိိုင် မှာ ပေါက်စျေး မေးပါ အပြင်ပေါက်စျေးလည်းစုံစမ်းပါ နမူနာ ရွေစျေး 15″ရည် 860000 ပေါက်တယ် ဆို ပါစို့ . ကို ဝယ် မှာ 2″ ပဲ 5° ရေ ဆိုပါစို့ . .၁ကျပ်သားမှာ 16ပဲ ။
860000 ÷ 16=53750 ပျမ်းမျှ 1″ပဲတန်ဖိုး =53750ks
1°ရွေး တန်ဖိုး = 6718ks
ကိုယ်ဝယ် မှာ 2” 5°
= 2× 53750=107500ks
=2းခုပေါင်းပါ =(140000ks )ထားပါ ဒါက ရွေတန်ဖိုးပါ. ရွေတန်ဖိုးသိပီဆို တော့ သူတို့မှာ အလျော့ တွက် လက်ခ ဆိုတာ ပေးရပါတဟ် (.ဒုံး မှာ အလျော့တွက်လက်ခမရှီပါ )
သူတိို့ကို မေးပါ 2″5° နမူနာ လက်စွပ် ပေါ့ .,မေးလိုက်ပါ 2သိန်းကျော် ကျမယ် ဆို လုံးမဝယ်ပါနဲ့ ။ 2″တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အထည်ကို လျော့တွက်လက်ခ5° ထိပဲတန်ပါတယ် , ရွေတန်ဖိုး ခုန 140000ထားပါ တော့ လျော့ တွက်လက်ခ 7° 47000= ထား ၂ခပေါင်း =190000 /သာတန်ပါတယ် ဒါ အသစ်ရွေထည် တွက်ပြတာ ပါ
.ဒါကို တချို့က 140000 ပဲတန်တာ ကို လျော့တွက် လက်ခတွေမတရားပေါင်းပါတယ် 230000တို့ဘာတို့ကျမဟ် ဆို မတန်ပါဘူး .အလျော့တွက်လက်ခဆိုတာ က ပြန်သွင်းရင် ကိုယ်ရှုံးမဲ့ငွေပါ . ရွေစျေးအတတက်အကျပေါမူတည်ပီသိပ်မရှုံးဘူး ဂျင်းထည့်ပါတယ် အဲ့တာ အခေါက်မှ သိပ်မရှုံးတာပါ ပါ ၂ကျပ်သား ၃ကျပ်သားတို့ ဆို ရွေစျေးတတ်ရငိ မြတ်ပါတဟ် အလှဝတ်တဲ့သူတွေတွက်လုံးဝမတန်ပါဘူး ရှင်.,
တွက်ကြည့်ပါ လက်စွပ်တကွင်းကိို 190000 အလျော့တွက်လက်ခပါပီ ဒီလောက်ပဲတန်တာ ကို 230000 ဆို တော့ပြန်သွင်းရင် ဘယ်လောက်ရှုံးမှာလည်း ???
ခုနရွေတန်ဖိုး 140000ပဲပြန်ရပါမယ်် .190000ဆို အလျော့လက်ခ ရှုံးပါတယ် ပြန်မရပါ 50000 ဆုံးပါတမယ်် 230000ဆို /90000တောင်ရှုံးပါမယ်
ဘယ်လောက် %ရှုံးသွားမလည််း ?? 190000 ဝယ် ထားပီ 50000ရှုံးတဟ် ဆို 25%တောင် ရှုံးပါတယ် ရှင် . ,.‌230000’ပေးဝယ်ခဲ့တဟ်ဆိုရင် =ကိုယ်ပြန်ရမာ 150000ဝန်ကျင် ဆိုတော့= 80000 ကိုယ့်ပိုက်ဆံရှုံးမှာပါရှင် =အရမ်းများလွနး်သွားပီ ။
တချို့ကျောက်နဲ့ရွေနဲ့ဝယ်ရင်် သတိထားပါကျောက်တန်ဖိုးနုတ်ပီရွေချိနိမေးဝယ်ပါ.ဂျင်းထည့်ခြင်းမှကင်းဝေးပါစေနော် .,ဒီpost မှာအမှားပါလည်းထောက်ပြပါ မသိတာလည်း ထပ်မေးပေးပါာ
.ဘယ်သူတဦးတယောက်ကိုမှတိုက်ခိုက်လိုခြင်းမရှိပါ …ကိုဟ်ချွေးနည်းစာကို မတရားအရှုံး မခံခြင်တဲ့စေတနာပါ…အဓိကရွေ တန်ဖိုး ပေါက်စျေးအလေးချိန် ကို တွက်ပီ သိဖို့ပါ
.နောက်မှ အလျော့တွက်လက်ခမေးပါ ဘဟ်လောက်ယူသလည်း များရင်မဝယ်ပါနဲ့ စစ်ကြည့်ပါစစ်လို့ရရင်ဝယ်ပါ.2ပဲ တန်လက်စွပ်ဆို လျော့တွက်လက်ခ ၅ရွေးပဲတန်ပါတဟ်… နမူနာ 1ကျပ်သားတန်ဆို 2-3″ပဲတန်ပါတဟ် design တွေ ပေါမူတည်ပီလက်ခ အလျော့ ပေးရတာများပါတယ်
သိိသလောက် စေတနာဖြင့် ပြန်မျှဝေပေးကြပါနော်. လွတ်လပ်စွာshare နိုင်ပါသည်.ထပ်ပြောရင် ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးထောင်မို့အဆုံးထိဖတ်ပေးတာကျေးဇူးပါ,